ခြားနားချက်ကဘာလဲ DataNumen Outlook Repair နှင့် DataNumen Outlook Drive Recovery? - DataNumen
သင်၏ထုတ်ကုန်သည်ကျွန်ုပ်၏ပျက်စီးနေသောဖိုင်ကိုပြန်လည်ပြုပြင် / ပြန်လည်ရယူနိုင်ခြင်းရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်သနည်း။
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်တစ် bug ကိုရှာပါ။ ဘာလုပ်မလဲ?
သင့်ကုန်ပစ္စည်းတွင် feature တစ်ခုမရရှိနိုင်ပါ။ ဘာလုပ်မလဲ?
“ Share ချိုးဖောက်မှု” အမှားကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
တိုးတက်မှုဘားသည်မပြောင်းလဲပါ (သို့မဟုတ်ဖြေးဖြေးပြောင်းလဲသွားသည်) နှင့်ပရိုဂရမ်သည်အေးခဲသွားသည်။ ဘာလုပ်မလဲ?
အပြည့်အဝဗားရှင်းကိုမတပ်ဆင်မီ demo version ကို uninstall လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
သင်၏ software ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမလဲ။
demo version နှင့် full version တို့၏ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
ပျက်စီးနေသော Mac ဖိုင်ကိုပြုပြင်ရန်သင်၏ဆော့ဗ်ဝဲကို သုံး၍ ရနိုင်မလား။
ငါ့ဖိုင်ပြီးသားဖြစ်သည်zip ဒါမှမဟုတ်။rar ပုံစံ။ Win နဲ့အတူအဲဒါကိုဘယ်လို compress လုပ်ပြီး encrypt လုပ်နိုင်လဲZip ဒါမှမဟုတ်ဝင်းRAR?
သင်၏ပရိုဂရမ်သည် MacOS တွင်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
သတ်မှတ်ထားသောဒေတာဘေ့စ်ကို Access 95/97 ပုံစံဖြင့်ထုတ်နိုင်ပါသလား။
DataNumen Outlook Repair/ လဲလှယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေး
PST ကိုပြုပြင်သည့်အခါ“ Out of memory” အမှားရတယ်။OST ဖိုင်။ ဘာလုပ်မလဲ?
လိုချင်သောအီးမေးလ်များသို့မဟုတ်အခြားအရာဝတ္ထုများကို PST ဖိုင်တွင်အဘယ်ကြောင့်ရှာမတွေ့သနည်း။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ PST ဖိုင်ထဲမှာမလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဘယ်လို?
ငါ drive ကို format လုပ်တယ် ကျွန်ုပ်၏ Outlook အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသလား။
ခြားနားချက်ကဘာလဲ DataNumen Outlook Repair နှင့် DataNumen Outlook Drive Recovery?
ခြားနားချက်ကဘာလဲ DataNumen Outlook Repair နှင့် DataNumen Exchange Recovery?
အုပ်စုခွဲကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲ zip ဖိုင်
spanned ပြုပြင်နည်း zip ဖိုင်
အဘယ်ကြောင့်ပြုပြင်ထားသောဒေတာဘေ့စ်ရှိနေ့စွဲအကွက်များစွာကို ၁၉၀၀-၀၁-၀၁-1900 သတ်မှတ်ထားသနည်း။
အဘယ်ကြောင့်ငါနေဆဲ fixed ဖွင့်လို့မရပါဘူး DBF ဖိုင်
ကျွန်ုပ်၏ C: drive ပုံရိပ်ကိုပုံတူပွားသည်။ ဒါကိုဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲ။
ဖန်တီးထားတဲ့ပုံကိုဘယ်လို mount ရမလဲ DataNumen Disk Image
ငါသည်သင်တို့၏ဘလော့ဂ်ဆောင်းပါးများတ ဦး တည်းနှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းတစ်ခု / ပြproblemနာရှိသည်။ ဘာလုပ်မလဲ?
· DataNumen Outlook Repair(DOLKR) သည်ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးသွားသည့် PST ဖိုင်ကိုမူရင်းဒေတာအဖြစ်ယူသည်။
· DataNumen Outlook Drive Recovery(DODR) သည် drive သို့မဟုတ် disk ကို source data အဖြစ်ယူသည်။ Drive သို့မဟုတ် Disk သည်သင်၏ PST ဖိုင်များကိုယခင်ကသိမ်းထားခဲ့သောနေရာဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်အကျင့်ပျက်သို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသည့် PST ဖိုင်ရှိလျှင်ဖိုင်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်နှင့် PST ဖိုင်အတွင်းရှိအီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူရန် DOLKR ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍ DOLKR သည်လိုချင်သောအီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပျက်ကွက်ပါကသင်ယခင်က PST ဖိုင်သိမ်းဆည်းထားသည့် drive / disk ကို DODR ကို အသုံးပြု၍ ဤအီးမေးလ်များကိုသင်ရနိုင်သေးသည်။
သို့မဟုတ်သင်၌ PST ဖိုင်မရှိလျှင်၊ ဥပမာသင်သည်သင်၏ disk / drive တစ်ခုလုံးကို format လုပ်သည်၊ PST ဖိုင်ကိုအပြီးတိုင်ဖယ်ရှားနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်၏ hard disk / drive ပျက်နေပြီး၎င်းတွင်ပါသော PST ဖိုင်များကိုသင်မရရှိနိုင်ပါ။ DODR ကိုတိုက်ရိုက်သုံးနိုင်သည်။
ခြားနားချက်, disk ကို, မောင်း, ost, PST
မေလ 17, 2021 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်
အဘယ်ကြောင့်အချို့ပြန်လည်ကောင်းမွန်မက်ဆေ့ခ်ျ၏အလောင်းများကိုအချည်းနှီးဖြစ်သနည်းခြားနားချက်ကဘာလဲ DataNumen Outlook Repair နှင့် DataNumen Exchange Recovery?